Translator Newsletter: Fampianarana, Lalao an-dahatsary sy maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2019 13:18 GMT
Tongasoa eto amin'ity fizarana Taratasim-baovaon'ny mpandika teny amin'ity herinandro ity! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Manomboka ho mpandika teny mahaleotena
Pikantsary avy amin'ny https://thoughtsontranslation.com
Corinne McKay, mpandika teny ankatoavin'ny Fikambanana Amerikana Mpandika teny izay manana traikefa efa ho 15 taona no manome fampianarana maromaro mahafinaritra ho an'ireo mpandika teny vaovao sy efa za-draharaha. Ny zava-dehibe momba izany dia ao amin'ny aterineto izany, noho izany dia afaka misoratra anarana sy manatrika any amin'ny toerana rehetra ianao! Ny fampianarana manaraka dia mitondra ny lohateny hoe Manomboka ho mpandika teny mahaleotena ary manomboka afaka herinandro vitsivitsy monja izany! Vakio bebe kokoa ary misorata anarana ato.
Mahafantatra ny misy ny lalao an-dahatsary
Pikantsary avy amin'ny http://motherboard.vice.com/
Ny fahazoana lalao an-dahatsary avy amin'ny fiteny iray mankany amin'ny iray hafa dia mihoatra noho ny fandikana ny lahatsoratra rehetra. Tsy maintsy jerena amin'ny fiteny sy ny kolontsaina vaovao izany izay manavaka ny mpihaino azy. Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe, “Tanim-banja milevina ny mamantatra ny misy ny lalao an-dahatsary ho an'ny tsena isan-karazany”, manohy milaza i Heidi Kemps hoe:
“Tsy dingana fotsiny amin'ny fahazoana ny zo handika zavatra iray sy avy eo mametraka rakitsoratra Anglisy ao anatin'izany ny famangitana ny misy ny lalao. Dingana sarotra mila fifanakalozana maro eo amin'ny mpandika teny, mpahaivarotra, sy developera izany, miaraka amin'ny fanelingelenana kely avy amin'ireo ambaratongam-birao eo an-toerana. “
Vakio ity lahatsoratra feno ity raha te-hahafantatra bebe kokoa momba ny tombontsoa sy ny voka-dratsy amin'ny fijerena ny misy ny lalao an-dahatsary!
Mahazo vola ara-potoana
Pikantsary avy amin'ny http://www.mtmtranslations.com/
Amin'ny maha-mpandika teny mahaleotena, zava-dehibe amin'ny fivelomana ny mahazo karama amin'ny asanao ara-potoana! Saingy matetika manahirana ny mitady mpanjifa maro sy fifanarahana isan-karazany. Alessandra Martelli, mpandika teny mipetraka any Turin, Italia, nametraka ity lisitra mahafinaritra ity izay ahitana toro-hevitra mikasika ny fomba hahazoanao karama amin'ny asa mafy ataonao ara-potoana. Jereo izany ary lazao anay izay eritreritrao!
Fitaovam-pandikanteny an-tsolosaina (CAT): Ny Tsara, Ny Ratsy ary ny Ratsy tarehy
Pikantsary avy amin'ny http://www.aboutranslation.com/
Maro ny fihetseham-po mifangaro momba ny fitaovana CAT eo amin'ny tontolon'ny fandikan-teny. Ho an'ireo izay tsy mahalala izany, dia Computer-Assisted Translation (CAT) Tools (Fitaovana Fandikan-teny amin'ny solosaina) izany. Mihevitra ny mpandika teny sasany fa tena manampy be azy ireo izany satria mampiasa zavatra toy ny fitadidiana fandikan-teny izy ireo mba hanampy ny mpandika teny miasa amin'ny tetikasa lehibe. Ny hafa kosa mieritreritra fa tsy misy ilana azy ireo rehefa miasa amin'ny asa famoronana bebe kokoa. Mihevitra ny olona mahafinaritra ao amin'ny About Translation fa, tahaka ny mahazatra, dia misy ny tsara sy ny ratsy amin'ny zava-drehetra, saingy ny Fitaovana CAT kosa dia mety ho tena ilaina ho an'ny mpandika teny rehetra. Vakio bebe kokoa ato raha hijery ny momba izany.